Maamulka Yaaqshiid ee DKMG ah oo soo Bandhigay Saddex nin oo dharka dumarka dadka ku dhici jiray
Loading...	Home Wararka Maamulka Yaaqshiid ee DKMG ah oo soo Bandhigay Saddex nin oo dharka dumarka dadka ku dhici jiray
Maamulka Yaaqshiid ee DKMG ah oo soo Bandhigay Saddex nin oo dharka dumarka dadka ku dhici jiray	Tuesday, 03 July 2012 23:14	Maamulka degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay maanta oo Talaado ah saddex dhallinyaro rag ah oo laba ka mid ah ay xirnaayeen dharka dumarka dhacna u geysanayay dukaan ku yaalla suuqa labaad ee Muqdisho ugu weyn (Suuq Bacaad).
Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid Muxyadii Xasan Jurrus iyo taliyaha saldhigga degmada, Maxamed Maxamuud Yalaxoow oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in dhallinyaradan ay ka tirsan yihiin Al-shabaab lana soo qabtay iyadoo dhac geysanaya.
"Howgal ay ciidamada booliiska sameeyeen ayaa lagu soo qabtay saddexdan ruux oo dhac u geysanayay dukaan ganacsi," ayuu yiri taliyaha saldhigga Yaaqshiid oo sheegay in maxkamad la horgeyn doono dhallinyaradaas.
Sidoo kale, guddoomiyaha degmada ayaa isaguna sheegay raggana lasoo qabtay ay ka tirsan yihiin kooxda Al-shabaab uuna mid ka mid ah aabbihii u sheegay inuu mar hore ka baxay, lana xiray inkastoo lasii daayay goor dambe.
Dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay halka lagu soo bandhigay saddex ruux oo qaarkood ay xirnaayeen dharka dumarka, kuwaasoo sidoo kalena xirnaa indho-shareer, waxayna tani fajaciso ku noqotay dadkii goobta isugu soo baxay.
Inkastoo dhallinyaradan aanay la hadlin saxaafadda ayaa haddana waxaa lagu soo bandhigay goobta qoryo ay wateen kuwaasoo la sheegay inay dhaca ku geysanayeen